Ogaden News Agency (ONA) – Kormeerkii Waftiga Gudomiyaha JWXO iyo Jaaliyada Denmark oo Maanta Lagu Qabtay Copenhagen.
Kormeerkii Waftiga Gudomiyaha JWXO iyo Jaaliyada Denmark oo Maanta Lagu Qabtay Copenhagen.
Posted by ONA Admin	/ February 1, 2014
Waxaa Maanta ooy taariikhdu tahay 1-2-2014 lagu qabtay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen shir aad ubalaadhan oo si heersare ah loosoo agaasimay. Shirkan ooy kasoo qaybgaleen dadwayne aad utiro badan oo iskaga kalayimid dhamaan degmooyinka uu ka kooban yahay wadanka Denmark. Sidoo kale waxaa shirkan kasoo qaybgalay shacab tiro badan oo kasoo kicitimay wadanka Sweden.
Waxaa shirka kasoo qaybgalay oo kale marti sharaf aad ubadan oo lagu martiqaaday kulankan. Waxaa kamid ahaa marti sharaftii maanta sida wanaagsan ooga sooqaybgalay shirkan masuuliin iyo madax kamid ah Jaaliyaadka Eriteriya iyo Oromiya ee kudhaqan wadanka Denmark. Waxaa kale oo iyaguna madasha shirka kamaqnayn oo soobuux dhaafiyay hoolkii shirku kadhacay shacab wayne faro badan oo kasocday walaalaha Soomaliwayne. Sidoo kale waxaa kamid ahaa marti sharafta sida qiimaha badan ooga qaybqaatay shirkan masuuliin kasocday bulshada Danish ka ah ee udhalatay wadanka Denmark.
Waxaa shirkan lagu soo bandhigay filin aad umurugo badan oo laga soo diyaariyay xasuuqa ba,an ee arxan darri ah ee uu Gumaysiga Wayaanuhu kuhayo shacabka Somalida Ogadenya kasoo uu soobandhigay Mudane Cabdullahi Xuseenoo naftiisa khatar ugaliyay siduu beesha caalamka oogu soo bandhigi lahaa xasuuqa iyo gumaadka baahsan ee Ogadenya kasocda.
Kadib markii dadwaynihii madashada shirka iskugu yimid ay daawadeen filinkii laga soodiyaariyay Ogadenya ayaa waxaa mar kaliya isbadalay dareenka kaqaybgaleyaasha madasha joogay. Filinkan oo muujinayay tacadiyada iyo xadgudubka kadhanka ah xuquuqda banii,aadamka ee laguhayo bulshada rayadka ah ee kudhaqan wadanka Ogadenya ayaa noqday mid argagax iyo murugo badan kureebay daawadayaashii filinka.
Waxaa su,aalo kusaabsan filinkan laga waydiiyay Mudane Cabdullahi Xuseen oo si cilmiyaysan ooga wada jawaabay dhamaan su,aalihii ay dadwaynuhu waydiiyeen. Mudane Cabdullahi yaa oogu bishaareeyay dadwaynihii soo buux dhaafiyay hoolkii filinka lagu daawaday inuu filinkaas oo hada kahor Sweden laga daawaday in ay shirkad international ahi qaadatay luuqado badana lagu turjumayo caalamkana lagawada daawan doono haduu eebuhu yiraahdo. Waxaan shaki kujirin in qofkii filinkan daawada uusan jiif iyo joog toona ladaynin.
Dhanka kale waxaa daawashada filinka kabacdi laqabtay kulan ugaar ah dadwaynaha af Somaliga kuhadla ee munaasabadan kasoo qaybgalay.
Waxaa codbaahiyaha sidiiran loogu soodhaweeyay Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya Admiral Maxamad Cumar Cismaan isagoo gudoomiyuhu kajeediyay kulankan warbixinadii oogu danbeeyay ee wadanka Ogadenya iyo guulaha ay gaadheen Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya ee kadagaalama jiida hore.
Wuxuu gudoomiyuhu aad ooga waramay xaalada uu maanta gumaysigu kujiro taasoo soodhawaynaysa guusha uu shacabka S.Ogadenya oogu jiro aayo katashigiisa. Warbixinta Gudoomiyaha oo ahayd mid aad uxiisa badan ayay dadwaynuhu aad oogu diirsadeen. Dhanka kale wuxuu gudoomiyuhu aad bogaadin iyo amaan diiran usoo jeediyay shacabwaynaha Soomaaliyeed ee jecel gobanimada Somalida Ogadenya iyo sida ay hiil iyo hooba ugarab taaganyihiin Halganka uu shacabka Somalida Ogadenya oogu jiro siduu xuquuqdiisa muqadaska ah kuheli lahaa.
Waxaa kamid ahaa erayada khudbadii uu Gudoomiyuhu kajeediyay madasha shirkan Intuu halganku socdo madax iyo masuuliin badan yaa ushihiidi ama xabsi ugali halganka dartii taasoo dardar iyo xamaasad balaadhan kubeeraysa dadwaynaha jecel Halganka Somalida Ogadenya. Dhiiga Halgamaagu waa sida geed kubaxay halganka iyo erayo kale oo aad uqiimo iyo xikmad badnaa.
Waxaa iyaguna khudbado aad uxiiso badan kajeediyay kulankan qaar kamid ah marti sharaftii kasoo qaybgalay shirka kuwaasoo dhamaantood muujiyay dareenkooda iyo taageeradooda ay uhayaan Halganka Shacabka Somalida Ogadenya uu oogu jiro siduu ooga xoroobi lahaa gumaysiga Itoobiya ee kunaaxay dhiiga bulshada rayadka ah ee kudhaqan Ogadenya.